yini ukuguqulwa kwe-cnc? | I-PTJ hardware inc.
Ikhaya > Imisebenzi > I-CNC Turning
YINI i-CNC Turning?
CNC Turning Machining kuyindlela zobuchwepheshe ukucutshungulwa indlela ukucacisa izingxenye zensimbi.
Ingacubungula izinhlobo ezahlukahlukene zezinto zokwakha, kufaka phakathi i-316, 304 insimbi engagqwali, i-carbon steel, i-alloy steel, i-alloy aluminium, i-zinc alloy, i-titanium alloy, ithusi, insimbi, ipulasitiki, i-acrylic, i-POM, i-UHWM nezinye izinto zokusetshenziswa, zingacutshungulwa zibe isikwele , inhlanganisela eyindilinga Izingxenye zesakhiwo esiyinkimbinkimbi.
Lathe machining kuyingxenye machining futhi kukhona izinhlobo ezimbili main machining:
1. Lungisa ithuluzi lokujika uphinde ucubungule ubuciko bokusebenza obungenalutho ngokushintshana
2, indawo yokusebenza ilungisiwe, ngokujikeleza kwejubane lomsebenzi, ukunyakaza okuvundlile nokumile kwethuluzi lokujika (umnikazi wethuluzi) lokunemba ngemishini.
Machining Ukuvula Metal Services(i-aluminium ▲)
I-PTJ isitolo sakho sokumisa esisodwa sokwelashwa kwe-CNC Turning Services & Surface.
Sinikeza izingcaphuno ezisheshayo, umthamo omkhulu, amanani amakhulu, nekhwalithi eqinisekisiwe..
Ukuguqula umphini we-cylindrical / iron shaft (insimbi▲)
Ama-lathes asetshenziselwa kakhulu imishayo yemishini, ama-disc, imikhono neminye imisebenzi yokusebenza enendawo ejikelezayo.
Luhlobo olusetshenziswa kakhulu lwamathuluzi omshini ekwakheni imishini nasekulungiseni izitshalo..
Ukubekezelela Ukuguqula i-CNC?
I-PTJ Hardware inikeza izinsizakalo zokuguqula i-CNC esheshayo nenembile. Umnyango wethu okhethekile wokujika we-CNC uqukethe ama-lathes e-state-of-the-art. Ngokuhambisana nama-machinists ethu abanolwazi kakhulu, singakwazi ukuhlela ngisho nokusebenza okuyinkimbinkimbi kakhulu kokuphenduka.
Amakhasimende ethu amaningi ahlinzeka ngemidwebo yawo, kepha uma ungenayo eyakho, singathatha imibono yakho siyenze izingxenye zethu sisebenzisa amandla ethu we-CAD / CAM asendlini.
Kungani Khetha i-PTJ CNC Turning Services?
Ukukhiqiza - Singakwazi ukukhiqiza izingxenye ezivela ebangeni elibanzi lezinsimbi, ama-alloys, nama-plastiki, siqinisekise ukuthi ungaba nezinto zakho ezenziwe ngento efanelekile yohlelo lokusebenza oluhlosiwe.
Ikhono le-CAD / CAM- Senza izinqubo eziningi zesibili endlini futhi singaphatha nezinqubo zangaphandle ezenziwa ezinye izitolo, senza lula inqubo yokutholwa kwengxenye yakho nokusiza ukukunikeza izingxenye eziphelele.
yizinhlobonhlobo -Izihlakala zethu ezingaphakathi endlini zingaguqula izingxenye zifike ku-30 ​​”ububanzi. Kungakhathalekile ubukhulu nobunzima beprojekthi yakho yokuguqula i-CNC, i-PTJ inethalente nobuchwepheshe obusendlini ukubiza ngempumelelo ukufeza izidingo zakho zokuguqula i-CNC.
IZIFUNDO ZETHU ZESIKHUNGO SE-CNC
Xhumana nathi namuhla ukuze ufunde kabanzi mayelana nezinsizakalo zokuguqula i-CNC ye-PTJ Hardware.
● CNC Machining Izingxenye ze-elekthronikhi